Isi atụmatụ nke magnesium crucible
- Mere nke pụrụ iche alloy ígwè, eguzogide magnesium corrosion, elu okpomọkụ.
- Ihe na-egbuke egbuke enweghị Ni ma ọ dịghị emeghachi omume na ngwọta magnesium; crucible na-eguzogide okpomọkụ dị elu nke 600 ruo 800 Celsius C ma nwee ike ịrụ ọrụ nke ọma.
- Crucible integral nkedo, enweghị ịgbado ọkụ mgbawa na welding nrụgide, ya mere ọ nwere ike hụ na n'ụzọ na-adịghị mma na-agbaze nke ọla a wụrụ awụ.
Nye ndị ọrụ ndụmọdụ ndụmọdụ ọrụ n'efu.
Nye katalọgụ, profaịlụ azụmaahịa, asambodo kredit na ozi ndị ọzọ.
Gaa na nhazi ngwaahịa, usoro nhazi na njikwa mma.
Nhọrọ n'efu na ụdị nhọrọ dịka ọnọdụ saịtị na mkpa onye ọrụ si dị.
N'ime usoro mmepụta ngwaahịa, a na-akpọ ndị ọrụ teknụzụ dị mkpa nke ndị ọrụ ka ha gaa na ụlọ ọrụ anyị ka ha lelee nyocha nke usoro ọ bụla na usoro nrụpụta, a na-enye ndị ọrụ teknụzụ dị mkpa na ụkpụrụ nyocha na nsonaazụ ngwaahịa.
Ekwesịrị ịme ọzụzụ nka na ụzụ dịka mkpa ndị ọrụ siri dị, yana ngwaahịa kwesịrị imeziwanye n'oge dịka mkpa ndị ọrụ siri dị.
A na-ahazi oku ndị ahịa na akwụkwọ ozi n'ime awa 8, injinia ọrụ nọ na njikere awa 24. Ọ bụrụ na edozighị mmejọ ahụ, onye injinia ọrụ enweghị ike ịpụ na saịtị ahụ, yana ikike onye ahịa chọrọ ịhapụ saịtị ahụ.
Nke gara aga: Magnesium alloy dosing mgbapụta
Osote: Magnesium mmiri mmiri nnyefe ọkpọkọ